TubeMogul: Digital Video Ad Atụmatụ na yingzụcha Ihe Channels | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 8, 2016 Douglas Karr
eMarketer buru amụma na nkezi mmefu mmefu mmefu ego bụ 88% TV, 7% vidiyo dijitalụ na 5% maka vidiyo vidiyo. Na ihuenyo nke abụọ na vidiyo vidiyo na-ebili ngwa ngwa, TubeMogul achọpụtala na ịkwado usoro mgbasa ozi ga-eme ka ị mata ma belata ọnụahịa mgbasa ozi maka onye na-ekiri ya.
N'ezie, na ihe omumu ihe banyere Hotels.com, TubeMogul chọpụtara na mIcheta edemede bụ 190% ka ukwuu maka ndị hụrụ mgbasa ozi na TV naanị ma 209% ka ukwuu maka ntanetị naanị ma e jiri ya tụnyere ndị na-ahụghị mgbasa ozi ma ọlị. Ihe ncheta kachasị sie ike, bụ maka ndị hụrụ mgbasa ozi na ihuenyo abụọ ahụ. Ndị na-ekiri mgbasa ozi na TV na ntanetị nwere ncheta nke 39% ma ọ bụ 255% ka ukwuu karịa ndị na-ahụghị mgbasa ozi.
Nsogbu a, n'ezie, bụ otu onye na-azụ ahịa nwere ike ịhazi gafee ihuenyo yana mgbasa ozi vidiyo ha. Tubemogul na-agbanwe atụmatụ site na usoro adịghị mkpa na nke siri ike yana ngwa ọrụ dị ike nke ndị na-ere ahịa na-enweta mgbe niile. Iji software na-enye ndị mgbasa ozi mgbanwe iji mepụta ọtụtụ atụmatụ n'afọ niile ma dozie atụmatụ mgbe atụmatụ gbanwere. TubeMogul na-enyere ndị mgbasa ozi aka ịhazi, zụta, tụọ ma bulie mgbasa ozi vidiyo ha n'ofe ihuenyo, gụnyere:
Mgbasa Ozi Dijitalụ Dijitalụ - na-iyi na na-ọkọlọtọ yiri nkata, ọkọlọtọ na mmekọrịta tupu mpịakọta formats ndị kasị nkịtị maka mgbasa ozi video dijitalụ.
Mgbasa ozi vidio ekwentị - mgbasa ozi mkpanaka maka ịbawanye vidiyo vidiyo.
Mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi - TubeMogul bụ otu n'ime vidiyo izizi izizi iji jikọta na Facebook API. Nwere ike iwekọta mgbasa ozi vidiyo gị na Facebook na Instagram yana TVar dị ugbu a, vidiyo dijitalụ, ma gosipụta atụmatụ mgbasa ozi.
Programmatic Television Mgbasa ozi - Site na ị na-akpachapụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi telivishọn, usoro ihe omume TV (PTV) anyị na-enye gị ohere ịzụta mgbasa ozi TV site na iji ngwanrọ, na-enye gị ohere ịnweta ngwa ahịa na ndị na-ege ntị adịghị site na usoro ọdịnala nke ịzụ ahịa telivishọn.
TubeMogul na-enye akụrụngwa adịchaghị ọnụ ahịa yana ọma ahịa RTB, ndị na-ege ntị na-elekwasị anya site na omume igwe mmadụ, ọdịdị ala, omume na nghọta ndị na-ege ntị, nyocha nkwupụta mgbasa ozi, yana ngwa ọrụ arụmọrụ maka igbu na njikarịcha.
Enweela aha tubeMoguls a onye ndu n’etiti Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi na The Forrester Wave ™. Ha na-enyekwa usoro ọzụzụ ọzụzụ na asambodo zuru ezu maka ndị na-ere ahịa akara site na Mlọ akwụkwọ TubeMogul.
Budata Akwụkwọ White White nke TubeMogul na atụmatụ Cross-Screen
TubeMogul dị maka ụdị abụọ na ụlọ ọrụ.
Tags: dijitalụ video mgbasa oziife agbaramgbasa ozi vidiyo ụwamgbasa ozi vidiyo mbamobile video mgbasa ozimmemme mmemme tvmgbasa ozi vidiyo na-elekọta mmadụtelivishọn mgbasa ozitubemogulTV na-akpọsavideo mgbasa oziIhe Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi